सानिमा बैंकको नाफा २.७५% बढ्यो, वितरण योग्य नाफा ५७ करोडभन्दा बढी
वैशाख ३१, काठमाडौं । सानिमा बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. १ अर्ब ६१ करोड ८७ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ ।
यो नाफा गत वर्ष यसै अवधिसम्म रू. १ अर्ब ५७ करोड ५३ लाखभन्दा बढी थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष उक्त कम्पनीको नाफा २ दशमलव ७५ प्रतिशत बढी भएको छ । कम्पनीले बुधवार सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार वितरण योग्य नाफा रू. ५७ करोड ६७ लाख रहेको छ ।
यस वर्ष १० प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ८० करोड १३ लाख ८० हजार पु¥याएको उक्त कम्पनीको जगेडाकोष रकम गत वर्षभन्दा ४५ प्रतिशत बढी रू. ३ अर्ब २४ करोड ९७ लाख ७४ हजार कायम भएको छ ।
गत वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्म रू. २ अर्ब २४ करोड २५ लाखभन्दा बढी सञ्चालन गरेको उक्त कम्पनीले यस वर्ष सोहि अवधिसम्म रू. २ अर्ब २९ करोड ७७ लाखभन्दा बढी सञ्चालन नाफा गरेको छ ।
सञ्चालन नाफा गत वर्षभन्दा २ दशमलव ४६ प्रतिशत बढी भएको छ । यस अवधिसम्म गत वर्षभन्दा ११ प्रतिशत बढी रू. ३ अर्ब २४ करोड २७ लाखभन्दा बढी खुद व्याज आम्दानी कम्पनीले गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले यस वर्ष रू. १ खर्ब ८० करोड ६५ लाखभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ भने रू. ९२ अर्ब ११ करोड ९८ लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष सो कम्पनीले १२ दशमलव ७९ प्रतिशत निक्षेप र १३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढाएको हो ।
गत वर्ष शून्य दशमलव १२ प्रतिशत रहेको कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा यस वर्ष शून्य दशमलव १६ प्रतिशत कायम छ । तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २४ दशमलव ७७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १४४ दशमलव २४ छ ।
एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंकको बोनस शेयर सूचीकृत[२०७७ सावन, २२]
कुमारी बैंकको शेयर सूचीकृत[२०७७ सावन, २२]
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको बोनस शेयर सूचीकृत[२०७७ सावन, २२]
प्रभु इन्स्योरेन्सको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत[२०७७ सावन, २२]